Ibhodi le-backapck
Ibhodi likajosaka ohambayo, owaziwa nangokuthi ukukhangisa kwamabhodi ezikhangiso Omuntu, iyindlela engabizi kakhulu futhi ethengekayo yezindlela zokukhangisa.Iphuzu eliyinhloko i-graphic iphrintiwe ku-vinyl enamathiselwe ebhodini legwebu, hhayi indwangu.Kulula ukukhiqiza noma ukushintshwa ngezindleko eziphansi.
Lo bhaka wokukhangisa awunazandla, awusindi futhi uyaphatheka, ibhodi elingu-59x 42cm liphakanyiswe phezu kwekhanda, libonisa iphosta eshintshekayo ngaphambili nangemuva, qinisekisa ukuthi wonke umuntu angabuka umlayezo wakho ohlukile, ilungele ukuphromotha kwesikhashana.
Izicelo:Ukukhangisa Kwangaphakathi Nangaphandle, Imibukiso, Imibukiso, Imicimbi, Imibukiso, Amaphromoshini, Imishado, Amaphathi, Amakhonsathi njll.
Iphaneli yangemuva ye-3D-foam ebunjiwe enesisindo esikhanyayo enomklamo wesiteshi sokugeleza komoya, Izintambo ezilungisekayo, lezi ziqinisekisa ukuthi ogqokile ukhululekile;ube nephakethe eliseceleni kanye negumbi elingemuva lokubamba isiphuzo noma amaflaya okuthengisa, ushiye ogqokile izandla zamahhala.
Isigxobo se-aluminium esingasindi futhi esiqinile njengesakhiwo, ubude besigxobo obufana nojosaka, sipakishwe ebhokisini elifanayo.
Umfanekiso ungasuswa kalula noma ushintshwe , Usayizi wokuphrinta : H59 x W42cm njengoba kuphakanyisiwe.
Lesi sibonisi sikabhaka webhodi lebhodi labantu siyithuluzi elisebenzayo lokumaketha ukuze uthole ngempela uhlobo oluqashelwe ngendlela ethengekayo.
(1) Iphaneli elingemuva le-3D-foam elibunjiwe elinesisindo esilula elinomcamelo futhi livumela idizayini yesiteshi sokugeleza komoya, inikeza ukunethezeka kokusebenzisa isipiliyoni
(2) Igumbi elinoziphu namanye amaphakethe anikeza isikhala esengeziwe sokukhulula izandla zakho.
(3) Ibhande elilungisekayo livimbela ubhaka ekubeni uncike emuva emoyeni onamandla.
(4) Amahhuku aklama emabhandeni amabhodlela amanzi
(5) Izinto ze-Oxford zenza ubhaka uqine futhi uhlale isikhathi eside ukuze usetshenziswe isikhathi eside.
I-BIIDKT 59*42cm *2pcs 1.2KG 54*30.5*5.5CM
Okwedlule: Indoor Ring Gate
Olandelayo: Ibhajethi Yesikhwama
Ubhaka Deluxe - Umbrella